Ingabe uyazi lapho Tarko-Yamadivayisi? Leli dolobha lisendaweni ku Yamal-Nenets Autonomous isiFunda Russian Federation. Kuyinto sokuqondisa lePhure wesifunda. Ngo-2013, abantu 20.906 bahlala kuwo.
Likuphi Tarko-Yamadivayisi? It yasungulwa phakathi kwemifula Ayvasedapur Pyakupur futhi ithatha ibhange kwesokudla yokugcina. Umuzi isendaweni marshland flat. Insimu yalo amadamu amaningi - emachibini nasemifuleni ezinobukhulu obuhlukahlukene. Egajwe ihlathi-emathafeni zone, eduze nemifula sikhule amahlathi coniferous.
City Tarko-yabonakala ibalazwe Russian Federation kancane eminyakeni engaphezu kuka ayisishiyagalombili edlule. Ngokombono zomlando umbono kusenzima ngempela abancane. Nokho, ngenxa zindawo enyakatho, le nkathi umxhwele. Njengoba ayezungezwe amadolobha akhiwa engamashumi amabili noma amathathu edlule, Tarko-kubonakala ehlala yangempela. Wabhekana bonke ubunzima ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe, wayebhekene yokujama tsi ngaphansi uBrezhnev, badabula inkululeko wasenganekwaneni yokwakha kabusha inkathi wema engcupheni precipice e nineties.
Likuphi Tarko-Yamadivayisi? Ngo-1933, loMfula emfuleni lePhure waqala ukwakhiwa kwalesi sigodi. Ngesikhathi esifanayo, savula umtholampilo elincane lapho kwakubusa ezinhlanu.
Ngo-1934 kwanqunywa ukuba ukusungula Inspectorate at Purovsky abaphakanyiselwe ekungeneni ekomidini eliphezulu ukusebenzisa ezimali kwezomnotho kazwelonke. Ngaphezu kwalokho, Rybkoopsoyuz lahlelwa. Esinye sezenzakalo ebaluleke kakhulu kwakuyisimo inhlangano lesifunda radiocommunication inhlangano, okwathi ngemva kwalokho izindlu kwakufanele umsakazo eyamukelayo esiteshini.
Ngo-1935 Purovsky wesifunda kwamiswa weBhodi Yemfundo. Lesi sikole wakhona kwadingeka wabhaliswa abafundi nesikhombisa. Ngemva kwalokho kumephu Tarko-ahlanganiswe ebhukwini ihhovisi, abantu enkantolo, esibhedlela, ukudoba reindeer ezaziphila ngokufuya ipulazi collective, esigabeni wezilwane, igumbi lokudlela, isikole boarding.
Ngo-1947, Kuningi lapho Tarko-Yamadivayisi, ngoba insimu yalo kwakuhlelwa a Manor esiyingqayizivele Upper Purovsky reindeer ipulazi. Kusengenzeka bemthanda izihambi ngubani kahle expanses enkulukazi Russian Federation.
Ngo-1948 waqala ukwakhiwa elula ujantshi komgwaqo "Salekhard-Igarka". Abakhi enikeziwe ngokugcwele ukudla amabhizinisi endawo. Ngemva nje kancane kwalokho, uhulumeni wesigodi owawungo isitifiketi sabantu kwalesi sigodi futhi kwakhiwa ezitaladini ezinhlanu. Zonke izinombolo zokwakhiwa kwezindlu sekunikeziwe.
Ngokuvamile, le zamashumi amahlanu kwekhulu lamashumi amabili Kwakuyisikhathi esinzima kakhulu ekuthuthukeni edolobheni. Kutfutfukiswa Tarko-Yamadivayisi, futhi lonke leli zwe, isimiso, kulokhu saya frustratingly kancane. Amandla izakhamuzi zaseSoviet, kuhlanganise purovchan abangu okuhloswe ngazo ukululama ngokushesha kakhulu emnothweni emva impi yaba mibi kakhulu. Nokho, nakuba ukuphila ngemva kweMpi Yezwe II Kwakungelula ncamashi, izikhathi ezinhle emlandweni edolobheni namanje abakhona. Ngakho, phakathi nalesi sikhathi iziphathimandla Tarko-baqala ukucabanga hhayi kuphela mayelana nendlela ukubeka i-ruble esengeziwe endaweni yengcebo yezwe, kodwa futhi indlela yokuthuthukisa impilo bendawo, ukuhlela yokuzilibazisa wakhe. Omunye ukwambulwa kakhulu kulesi sici kwaba ukubunjwa Purovsky raypromkombinata, ekusebenzeni yayihloselwe ukuba ihlangabezane nezidingo ngokushesha tarkosalintsev. Ngaphezu kwalokho, le esifundeni waqala imisebenzi yayo KWEMASIKO uMnyango Sikhungo. Ngo-1951, umphakathi yezemidlalo ebizwa ngokuthi "Umlimi collective" yasungulwa nsuku yokuzithandela.
Lokho kancane ngakho, ngokoqobo sitini ngesitini kubeka isisekelo wezokuhlalisana wedolobha.
Lo mcimbi oyinhloko ngo-1950 njengoba isayithi "Salekhard-Igarka" emzini, futhi ngezinga elithile kwaba isinqumo ukuyeka ukwakhiwa zinomsebenzi kwaloliwe. Ngesikhathi esifanayo sathula "kweqa up" ngaphansi "chemin de fer" ezinkulungwane izimpilo zabantu. izakhamuzi Bengathokozile behlala ndawonye bengashadile akusashiwo befa ku gulag enkulukazi. Tarko-isithombe endaweni ehlukile baba kancane kancane fade ezingqondweni izigidi zabahlali Soviet.
Ngo-1976, Tarko-Yamadivayisi baba emzaneni ukusebenza. Isinqumo yokunika leli isimo esenziwa esigungu omkhandlu wesifunda amasekela ka Tyumen. Ngo-March 2004, kwaba ezingeni idolobha wesifunda. Ngesikhathi ukubukeka efanayo Tarko-zaqala ukushintsha ngokushesha zibe ngcono. Ngokushesha, idolobha ithole izimpawu ayo olusemthethweni - elingenamikhono izingalo kanye ifulege. Lesi sakamuva bubhalwe zomlando, amasiko, amasiko izimo zenhlalo yomphakathi nezomnotho kanye nezinye zendawo kamasipala.
Likuphi Tarko-Yamadivayisi? Esikhathini indawo ye sezulu ngokucijile ezwekazini. Isilinganiso lokushisa lonyaka endiza eduze degrees emihlanu ngaphansi kwezingaqhwa. umswakama nesihlobo ingeqi amaphesenti ayisikhombisa nesithupha. Isilinganiso isivinini somoya kwamamitha amathathu ngomzuzwana.
Wonke umuntu uyazi uwoyela kangakanani negesi ocebile Russia. Tarko-Yamadivayisi - idolobha, okuyinto iyisonto ifektri ngobukhulu yaseRussia onguchwepheshe ukucutshungulwa igesi condensate kanye uwoyela negesi umkhiqizi.
Ngesisekelo "NOVATEK-Purovsky Isitshalo" ngo-2005 kusetshenzwe de-ethanized igesi condensate. Lena yinkampani sokuqala salolu hlobo ukucutshungulwa zemvelo eziningi, lezo uvele elaliyiSoviet Union kuleminyaka eyishumi nanhlanu edlule. esigabeni sesithathu zalesi sihlahla, kwathi ngo-January 2014 amandla ukukhiqizwa wethulwa 2013, linwetshelwe kusukela angamathani ayizigidi ezinhlanu ukuze nanye ngonyaka. Lokhu kwenziwa ngenxa nokuthuma izindikimba ezimbili zanamuhla kwezobuchwepheshe gas condensate sinjalo. endaweni yabo Imininingwane ayizigidi ezingu ezintathu ngonyaka.
Lenin Street, 16 elise lePhure District Local History Museum. Phakathi nonyaka evakashela acishe abe yizinkulungwane ezinhlanu. Phakathi ziphephile 4560 ethulwa ekhaya, nezicathulo, izingubo, izinto zasekhaya, amathuluzi, izinto zokuhloba futhi izinto zenkolo Ihlathi Nenets.
Tarko-Yamadivayisi - kuphi? UMkhandludolobha ezintathu namakhulu nengxenye ukusuka eMoscow. Le ndlela zinganqotshwa ngemoto (endleleni "Surgut-Salekhard"), ngesitimela (isitimela esiteshini "Purovsk") noma ngendiza (sezindiza Itholakala Tarko-Yamadivayisi).
Okwamanje esungulwe izindiza ngqo Novy Urengoy futhi Salekhard. Eyokuqala ngo-September 2013 kuvulwa enkulu traffic kwebhuloho elisha phezu komfula. Pyaku lePhure yokuxhuma Tarko-Yamadivayisi futhi Purovsk. isakhiwo Obalulekile lakhiwa ngesikhathi - unyaka nezinyanga ezinhlanu esikhundleni ezihlelelwe iminyaka emithathu.
Siye sazama ngangokunokwenzeka impendulo enemininingwane kusikhungo sosizo ukuze umbuzo lapho lingumuzi Tarko-Yamadivayisi. Sithemba ukuthi incazelo ngenhla eye yakusiza ukuba ufinyelele ukujwayelana umlando lo masipala.
Lwase-Australia Endpoints. izixhumanisi zabo kanye nencazelo